I-Semalt Islamabad Expert - Iyini Injini Yokusesha (SEO)?
Ngendlela elula kakhulu, ukusekela injini nokwenza ngcono yinkqubo yokwandisa izinga lewebhusayithi yakho ukwenza kube khona phakathi kwezixhumanisi ezimbalwa zokuqala kumakhasi wokubuyisela injini. Ungase uzibuze ukuthi kungani iwebhusayithi yakho idinga ukukala phezulu. Lesi yisikhathi solwazi, futhi amakhasimende enza ucwaningo lwe-intanethi ngaphambi kokuyala noma yimuphi umkhiqizo noma isevisi. Uma ngabe iwebhusayithi yakho ivela phakathi kwezixhumanisi ezimbalwa zokuqala, amathuba amnandi ukuthi amakhasimende azochofoza isixhumanisi sakho bese ekugcineni enza i-oda lakho kuwe njalo.
UMichael Brown, ochwepheshe ophezulu Semalt , uchaza lapha ukuthi angayifinyelela kanjani izinga eliphezulu lokusesha injini yesayithi lakho futhi alondoloze.
Ngamafuphi, i-SEO ihlose ukwenza iwebhusayithi yakho ibonakale ekhasini lokuqala lomphumela we-injini yokusesha. Lokhu kungenxa yokuthi abantu ngokuvamile abafiki ekhasini lesithathu ngaphambi kokuthatha isinqumo. Kodwa-ke, kuye ngokuthi ukuncintisana kanjani niche yakho, kungabiza kakhulu noma kungabizi kakhulu ukuthi ufike ekhasini elilodwa. Ungagcina ufika ekhasini lokuqala uma unesineke futhi ulandela nemigomo echazwe ngezansi.
Okuqukethwe kwakho kufanele kucebe ngamagama angukhiye afanelekayo
Izinjini zokusesha zinquma inani lamawebhusayithi ngokusebenzisa ithuluzi elibizwa ngokuthi izicabucabu. Leli thuluzi likhahlaza iwebhu ngokuzenzakalelayo. Imvamisa lapho izinkanyezi zikhahlela khona iwebhusayithi yakho inquma ukuthi uzophakama kangakanani futhi izipikha zikubeka ukuthi okuqukethwe kwakho kuhambisana kanjani niche yakho.
Yingakho kubalulekile kuwe ukuthi ukwazi amagama angukhiye amakhasimende akho athayela kuzo izinjini. Lokhu kuzokusiza ukuthuthukisa okuqukethwe okuzungezile amagama angukhiye. Ngokwesibonelo, uma unikela ngezinsizakalo zomthetho ezenzakalweni ezilimazayo, amakhasimende akho angase abhale amagama angukhiye afana nokuthi "ummeli wokulimala eNingizimu Florida". Ngakho okuqukethwe kwakho kufanele kufaka phakathi wonke amagama angokhiye.
Kulo mhlangano, kubalulekile ukuveza ukuthi izigubhu azikwazi ukukhahlela umbhalo ngaphakathi kwesithombe. Ngakho-ke, kufanele uqinisekise ukuthi amagama akho angukhiye awahlanganisiwe ezithombeni. Manje, ukuthi uqonde ukubaluleka kwamagama angukhiye afanelekayo, ungase uzibuze ukuthi ungathola kanjani amagama angukhiye afaneleko we-niche yakho..Konke okudingayo kuyithuluzi lamahhala lekholi yegama legama le-Google AdWords. Leli thuluzi lizokusiza ukuthi ubone wonke amagama angukhiye ahambisana niche yakho. Ngakho-ke, udinga ukuqinisekisa ukuthi wonke amagama angukhiye avela kokuqukethwe kwakho nemethadatha yekhasi lakho.
Izinga lekhasi lakho linomboro kusuka ku-1 kuya ku-10 enikezwe kuwebhusayithi yakho ngokusekelwe ezixhumaneni zayo eziphumayo nezingenayo. Ukuze uthuthukise isikhundla sakho, qinisekisa ukuthi wonke ama-akhawunti wakho wezokuxhumana wezenhlalo axhunyaniswe kuwebhusayithi yakho. Uma isayithi lakho lixhunyaniswa nesayithi eliphezulu, lizoletha "ijusi lokuxhumanisa" kusayithi lakho, ngaleyo ndlela likhulise isikhundla sewebhusayithi yakho futhi. Ungazama futhi ukubhaliswa kumahhala, izinkomba ezivulekile ezithembekile kanye nemizimba yobuchwepheshe ehlotshaniswa niche yakho ngoba abathengi abangase bakwazi ukucinga ngezinkomba.
Ukunquma izinga lewebhusayithi yakho, ungalanda i-plugin njenge "PageRank Status". Isebenza nesiphequluli se-Google Chrome. Ukwazi isikhundla sakho kuzokusiza ukuqapha ukuthuthukiswa kwakho.
Gcina okuqukethwe kwakho okusha
Izinga lapho iziphequluli zenjini yokusesha zikhahlela khona amakhasi akho webhubhu zidlala indima evelele kuleso simo futhi, futhi, ngokuya kuncike ekutheni ugcina kanjani okuqukethwe kwakho. Ngaso sonke isikhathi uma ulayisha okuqukethwe okusha kuwebhusayithi yakho, iziphequluli zenjini yokusesha zizofika ukuze zishaye isayithi lakho. Ngaphandle kwalokho, izivakashi zakho nazo zizokujabulela ukufunda okuqukethwe okusha.
Ngakho, kufanele njalo ugcine okuqukethwe kwakho kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi. Susa umbhalo omdala, izithombe / izithombe, namavidiyo uphinde ubeke esikhundleni saso ngezinsha ezintsha nezithakazelisayo. Ungasetha ibhulogi kusayithi lakho futhi ubuyekeze ibhulogi ngokuqukethwe okusha nsuku zonke noma ngesonto ngalinye. Ekuqaleni, kungase kube nzima, kodwa kuyoba nzima uma ujwayele.
Ukuba usesikhathini namagama angukhiye wamanje afana nesayithi lakho, ungasebenzisa izaziso ze-Google. Kuzohlale kukubuyekeza ngamazwi angukhiye ukuthuthukisa okuqukethwe kwakho nxazonke.
Gcina amasu akho we-SEO abuyekeziwe
Imithethonqubo, izimiso, kanye nezinhlelo zokuhlela azikho static. Ziyashintsha, futhi ziyashintsha kaningi, ngakho-ke udinga ukuba usesikhathini ngezimo. Ngokwesibonelo, ngaphambi kwalokhu, isamba sewebhu sincike ikakhulukazi ukuthi ubeka kanjani okuqukethwe kwakho ngamagama angukhiye. Manje, kunezikhathi eziningi igama elingukhiye elivumelekile ukuba livele kokuqukethwe kwenani elithile lamagama. Uma kungenjalo, okuqukethwe kwakho kuzobekwa uphawu njengogaxekile, futhi kuzokwehlisa isikhundla sakho.